Enwere ọtụtụ ụzọ iji dị jụụ gburugburu anyị ma belata okpomọkụ dị ọkụ. Ebe dị ọkụ na-ebelata ike ike nke ahụ anyị ma gbochie anyị itinye uche zuru oke na ọrụ ọ bụla. Ọ na-adị anyị ezigbo mfe mgbe okpomọkụ dị elu n'ihi na ịhapụ ọsụsọ na ahụ anyị ga-aka. Yabụ iwelata ọnọdụ okpomọkụ nke gburugburu anyị ụfọdụ igwe jụrụ ajụ kwesịrị ịnọ ebe ahụ. Ọtụtụ ndị mmadụ na-ahọrọ igwe ikuku ma ọ bụ igwe ikuku iji mee ka ọnọdụ okpomọkụ dị jụụ maka ụlọ ha ma ọ bụ ọfịs ha.Powerower in air coolers is less but it gets unhygienic in obere oge na-achọ nhicha na mgbe mmezi.
Enwere ụzọ ọzọ akpọrọ igirigi Fans ndị ahụ dị n'ahịa mana amabeghị nke ọma. Mist Fans anaghị achọ ndozi oge niile dị ka nhicha ma ọ nweghị nsogbu na isi ísì ọjọọ. Naanị ihe ọ chọrọ bụ ijupụta mmiri kwa ụbọchị nke bụ naanị obere akụkụ achọrọ maka ndị na-ajụ ikuku.
Ka anyi ghota etu Mist Fans ndị ọzọ dị mma karịa Coolers Air
N'ezie ụgwọ mbụ nke igirigi Fans karịrị ikuku oyi ma ọ na-ewe obere mmiri maka misting na obi jụrụ ala okpomọkụ karịa ikuku oyi. Ọ bụ ezie na ndị na-eme ka ikuku oyi dị ọnụ ala, ha na-a moreụkwu mmiri iji rụọ ọrụ ya oge niile. Enweghị mmiri zuru ezu na mmiri nke ngwa nju oyi enweghị ike ime ka gburugburu ebe dị jụụ. Iji mmiri eme ihe n’oge ụkọ mmiri na-eme ka igwe jụrụ oyi bụrụ ezigbo nhọrọ.
Mgbe nhicha nke alụlụ ofufe adịghị mkpa iji zere isi ísì ọjọọ. Mist Fans n'ụzọ dị irè na-akwụsị wetara ijiji na ụmụ ahụhụ na-ekpochapụ ájá àjà na-ese siga na-akpaghị aka. Nke a na - eme ka ọ bụrụ ezigbo usoro jụrụ oyi site na ichebe anyị pụọ na nsogbu ahụike dị iche iche. Ebe tankị mmiri na ihe mkpuchi mmiri nke ikuku dị jụụ chọrọ nhicha oge niile iji zere isi ísì ọjọọ. Ijiji na ụmụ ahụhụ na-emerụ ahụ nwere ike ịbanye na igwe ikuku na uzuzu & anwụrụ ọkụ enweghị ike ịkwụsị. Nke a na - eweputa nsogbu ahụike dị iche iche.
Ọ bụrụ na igirigi Fans na-etinye ya n'èzí dị ka ụlọ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ mgbe ahụ ọ nwere ike ịbara uru nke ahịhịa site na ịbawanye ọkwa iru mmiri ma mee ka ebe ahụ dị jụụ. Lọ nkwakọba ihe na-ejikwa yaalụlụ ofufe iji debe ihe oriri ha ka ọ dị ọhụrụ ka o nwee ike ịmasị ndị ọrụ. Ma site na ikuku ndị na-ekpo ọkụ ikuku na-ejigide iru mmiri nke osisi ma ọ bụ na-echekwa ngwaahịa ndị a na-eri eri na-enweghị ike ime nke ọma.
Onye na-agba alụlụsenwere ike idowe ya ebe obula, di mfe ibughari ma kpuchie obere oghere. Mgbe ị na-efe ikukualụlụ ofufe anaghị atụba mmiri mmiri ma na-eme ka ebe dị mmiri mmiri. Ebe, ọtụtụ ikuku oyi dị nnukwu ma e jiri ya tụnyere yaalụlụ ofufes ma choo ohere karia alụlụ ofufe. Ha chọrọ mgbalị iji kwaga ebe ndị ọzọ ma chọọ ebe a kapịrị ọnụ maka ha. Ọ na-atụba mmiri mmiri nke na-ewe iwe mgbe ụfọdụ.
Ya mere, iji tinye iru mmiri n'ime ụlọ ma ọ bụrụ na ventilashị adịghị alụlụ ofufe guzo dị ka nhọrọ ka mma. Ọ na-ekpochapu mmiri, na-achịkwa oke okpomọkụ ma na-enye ikuku dị mma karịa gburugburu.